Ukudweba njengento yokuzilibazisa: apho uqala khona
Umntu kufuneka ahlale ekwazi ukuzibona ebomini. Ukuqonda oku kukwazi ukuzibonakalisa kwinto ethile enkulu - ukufumana izinto zobuchwepheshe ezahlukeneyo, imisebenzi yezenzululwazi, umsebenzi, ezemidlalo, apho abantu abaninzi bayazi malunga nabo, kunye nezinto ezincinci eziza kuba zizinto ezimbalwa ezikufutshane. Wonke umntu ukhetha indlela yakhe. Ukuba ucinga umdlalo wepiramidi iMaslow, kufuneka uyanelise amanyathelo athile ngexesha elilodwa: imfuno yokuhlonipha (ithuba lokuzilibazisa ukufezekisa impumelelo, ukuhlonishwa, udumo), imfuno yolwazi olutsha, imfuno yobuhle ukwaneliseka kwendlela yokuzonwabisa kunye nesidingo sokwenza izinto njengabantu ngabanye, ukufezekiswa kweenjongo).
I-hobby ayiyona indlela yokwenza into ngexesha lakho lokukhulula, kodwa kwakhona indlela yokuphumla, ubalekele iingxaki zemihla ngemihla, kwaye ngamanye amaxesha ufumana imali! Wonke umntu ukhetha uhlobo lwazo lokuzilibazisa. Omnye ubhala umbongo, amabali, umntu udlala ngokudansa, umntu udlala kumaqela omculo, umntu uhamba okanye uqokelela izitampu, umntu akazithandi kwiincwadi kunye nomntu kwiifilimu, kodwa kukho abantu udwebe. Yiyo yokugqibela eya kuxutyushwa kamva.
Umzobo ubonisa iimvakalelo, iingcamango, iimvakalelo, iiminqweno. Akunanto nangoko nje iingcali zengqondo kunye neengqondo zengqondo zixhaphaza kakhulu ukusebenzisa utyando lwezobugcisa ukukhupha umntu oxinzelelekileyo kunye neengxaki ezahlukeneyo zengqondo, kwakunye nendlela onokuyifumana ngayo iingxaki ezisemgangathweni lomntu, ubunzima bakhe.
Ngoko ukuba inkondlo ayinomdla kuwe, i-astronomy iyinkimbinkimbi okanye iyinkimbinkimbi, kwaye ukuthabatha izitampu kunzima, uzame ngokwakho kwimiboniso yobugcisa - ngokukhawuleza ngowakho!
Nangona ungeke ukwazi ukudala ikopi ye "Sistine Madonna", nakweyiphi na imeko, uya kufumana iimvakalelo ezintle kunye nokuzonwabisa okungenakuvela kwindlela yokwenza yedwa. Iipayili, zihlala ziqhakazile, zidibanisa, zenze isilinganiselo esikhethekileyo, ukudibanisa kwabo kuyamangalisa. Ngokubonakalisa into kwiphepha lephepha, ulahla uxinzelelo, ukhulule, uqale ukucinga kwindlela elitsha, kwaye ujonge ezinye iindlela zokuphuma kwiimeko ezinzima. Nokuba ukhumbule amava obomi, bangaphi abantu, beqala ukudweba, bashiya amateyipu aphuza, bexinezelekile, bafumana ukutshabalaliswa kweziyobisi okanye besifo esiyinkimbinkimbi, baze baxhaswa kwiimeko ezinzima zobomi xa kubonakala ukuba ubomi belahlekelwe intsingiselo yayo yonke imibala ekhanyayo. Kukho abantu abaninzi kangaka! Ngoko masisebenzise amava abo.
Ungaqala njani ukudweba?
Ungaqala njani ukuzonwabisa? Emva koko, ukuba ngumqali maxa wambi kunzima kakhulu ukukhetha izinto eziyimfuneko, ngenxa yokuba baninzi abantu abaphonsa kuphela ukudweba, kodwa nokubandakanya kwimidaniso, umculo, njl.
Ukuba awuyena oqeqeshiweyo, kodwa ungumqali oqalayo, kwaye unomtsalane, ke akudingeki ukuba uthenge iibhululo ezixabisekileyo ukusuka kubomvu bezilwanyana ezinqabileyo. Uqale nje ukudweba kunye nezinto zokuzilibazisa akufanele ube ngumthwalo kwi-wallet yakho. Ukuqala, ungasebenzisa oluqhelekileyo-ukusuka kwimvundla. Iibhontshisi kunye neengqungquthela zokubumba zingcono ukuba zingathathi, kuba i-smears iyanzima kwaye idibanisa, eyonakalisa ukubonakala komfanekiso. Kwakhona, musa kuqala ukuthatha iphepha elibiza, ungasebenzisa ii-albhamu zezingane eziqhelekileyo ekudwebeni, ezithengayo ezininzi.
Ngoku makhe sithethe ngamaphunga. Lo ngumbuzo onzima kakhulu, kuba unako ukudweba ngeepensela, iki, iipelisi ze-gel, i-watercolors, i-gouache, iipende ze-acrylic, isikhokelo nabanye abaninzi. Kuba ngumqali, kukulungele ukhethe i-watercolor okanye i-gouache. Kwaye ke, iipensele. Iyokuqala ikuvumela ukuba wenze ukukhanya, ukukhanya okuqhubekayo nokuphila, imihlaba, imizobo. Okwesibini kulungelelanise ukuba izakhiwo ziza kudlala, kwaye ezinye zisetyenziselwa nayiphi na imidwebo.
Emva kokuba izinto zithengiwe, isigaba sesibini siqala, esinokuthi sikhombiswe ngokomqathango ngumbuzo olandelayo - "yintoni ozoyivula?". Kwabaninzi, oku kubangela ubunzima. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungayifumana njani into entloko yakho, jilela ihlabathi: izitya, iiglasi, imithi, iziqhamo, abantu, izilwanyana, izindlu, iindlwana. Oku kulula, kuba into ephambili apha kukuziva umbala, ukukhanya kunye nendawo. Nangona, ngokubhekiselele ekuphuhliseni ubugcisa besikhashana, oku akuzange kuyimfuneko.
Ukuba uyazi kakuhle into ofuna ukuyifaka, vele udwebe! Ungesabi ukuba awuyi kuphumelela! Injongo yakho ayiyikuwina umvuzo kumfanekiso ogqwesileyo wonyaka, kodwa nje ukhulule, uthathe ingqondo yakho ecaleni elimnyama kwaye lixakeke imihla ngemihla. Jabulela kwizinto ozenzayo kwaye ungacasuli ukuba umfanekiso onemaphepha awuhambisani nezilindele.
Ukufumana inkokhelo ethile yamandla kunye nomoya, jonga ngezinye iinkqubo imisebenzi yamatumi ahloniphekileyo avela kwiinkulungwane ezahlukeneyo, khetha uhlobo lomdwebo okhethayo - luya kukusindisa ekukhethweni okubuhlungu indlela yokukudweba ngayo.
Ukukhetha i-Object Drawing
Ekuhambeni kwexesha, uya kuqonda ukuba uyathanda ukudweba uninzi, kwindawo apho ungabonakalisa khona. Xa oko kwenzeka - musa ukuyeka, khangela enye into entsha kule ndawo. Kwaye emva kwangoko emva kwexeshana yakho imidwebo yakho iya kuhlala eParis embonisweni? Kodwa nangona oko kungenzeki - velani! Ukusuka kuyo yonke into emitsha yokukhwabanisa, ukusuka kumgca wonke ohlukileyo, ukusuka kuyo yonke idayi yepende echithekileyo, kwindawo engafanele apho ufuna khona ... Jabulela, kuba ubugcisa bufanele buvuyise, kwaye ungabi ngumhlushwa wakho. Ngoko ukuba awukuthandi ukudweba, ungaziphoqeleli - zibeka eceleni upende kwaye ungapende uze uvele umnqweno. Kule nto kunye nobuhle bento yokuzonwabisa - unako ukuyeka ukuyenza.
Ukudweba, khumbula, njengomntwana, sonke sasingumculi! Yaye imifanekiso yabo yemboniso yayiyinto engcono kakhulu! Ngoko ziqhenyce ngezinto ozenzayo!
Ukuba ngokukhawuleza ufuna ukuphucula izakhono zakho, ngoko kwixesha lethu amathuba anesigxina. Oku kunye neendidi zezifundo zeekhosi, kunye nezifundo ezongezelelweyo, kunye nevidiyo ye-intanethi, kunye neencwadi, kunye namaphephancwadi kunye nolwazi oluninzi apho ummveki angafunda ezininzi ezithakazelisayo kwaye ezitsha, kunye nakwixesha elizayo-ukuphucula indlela yakhe yokudweba, ukudala yakhe isitayela. Ngoko udwebe!
Ngoku uyazi yonke into malunga nokudweba njengento yokuzilibazisa, apho uqala ukuphuhlisa ngendlela efanelekileyo. Ungesabi ukuvakalisa kunye nomoya wakho! Yenza oko!
Iintyatyambo zeFoamiran: i-aster, i-gerbera, yavuka
Ubuhle boNyaka omtsha ngezandla zabo: indlela yokwenza umthi weetrbhoni
Indlela yokubopha izinto zezingane ukusuka kwiminyaka eyi-0-1 ubudala
I-Magnet-snowmanman ukusuka kwivaji ukuya efrijini, iklasi yeklasi kunye nesithombe
I-Talisman ye-Feng Shui Star Ages
I-Needlework - ukwenza iimveliso zakho
Isipho kuwe ngeKrisimesi: ingelosi yodongwe lwepolymer, iklasi yeklasi
Iintsuku ezikhethiweyo zomtshato we-2016: qinisa izibopho kunye nentsikelelo yendalo yonke!
Umlingisi uLyubov Rudenko, i-biography
Inombolo yePythagoras: Bala isidima kunye nokuhlaselwa komntu ngomhla wokuzalwa
Abasetyhini abasemagqabini eRussia
Ngaba uDmitry Hvorostovsky unokunqoba umhlaza?
Ziziphi iinkqubo ze-spa zokukhetha kwi-salon yobuhle?
Ziyintoni na izithintelo zakho zesini malunga nawe?
Indlela yokujonga umhlobo kwiintshaba
Imozulu e-Abkhazia ngoJuni: sifunda imozulu!
Ukufakwa kwiSergei Pynzar: indlela yokukhawuleza ukukhupha imingxuma kwiisokisi, ividiyo
Ihluma kunye noshizi
I-Horoscope yeSagittarius-abafazi ngoFebruwari 2017
Indlela yokubangela ukubeletha ekhaya?
Kuthekani ukuba umyeni wamfihla umvuzo wakho kuwe?
Intombi entsha kaLeonardo DiCaprio
Iindlu zendlu - iikhamela iintyatyambo
Indlela inkwenkwezi "yoBomi obumnandi" ilahlekelwe isisindo: imenyu kunye nokuzivocavoca
Ukukhwabanisa kwesitratshi: iimpahla zangaphandle zempahla ekwindla ka-2015